हर्नियाको उपचार जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ | Ishan Bal Hospital, Kathmandu isamulti-specialty hospital that offers preventive and curative healthcare services. हर्नियाको उपचार जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ - Ishan Bal Hospital, Kathmandu isamulti-specialty hospital that offers preventive and curative healthcare services.
हर्नियाको उपचार जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ
नवजात शिशुमा कतिपय समस्या जन्मजात देखिन्छन् । कतिपयमा लक्षण गर्भमै पनि देखिन सक्छन् । यदि तपाईंको पहिलो बच्चामा जन्मजात ढाडमा मासुका डल्ला वा पानीका फोका देखिए भने दोस्रो बच्चामा पनि त्यस्ता समस्या देखिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
फोलिक एसिड र आइरन गर्भवती हुनुभन्दा पहिला लिएमा दोस्रो बच्चामा ढाडमा कुनै मासुका डल्ला वा पानीका फोका देखिने समस्याबाट जोगाउन सकिन्छ । अन्य विकसित देशमा शिशु जन्मनुभन्दा अगाडि नै समस्या छ कि छैनन् भनेर जाँच गर्दा कुनै समस्या देखिएमा फिट्ल सर्जरी गर्ने चलन छ । जसमा आमाको गर्भमा रहेको भ्रूणको सर्जरी हुन्छ । आमाको गर्भबाट भू्रणलाई बाहिर निकालेर सर्जरी गरी पुनः पाठेघरमा राख्ने गरिन्छ । जुन ल्याप्रोसकोपी सर्जरीबाट पनि गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा त्यो सेवा छैन ।
सरकारी अस्पतालमा कान्ति बाल अस्पतालमा मात्र बालशल्य चिकित्सक (पेडियाट्रिक सर्जन) छन् । निजीमा ईसान बाल तथा महिला अस्पतालमा पनि यसको सुविधा छ ।
कतिपय बच्चा जन्मँदा छोरा हो वा छोरी छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । त्यसो हुँदैमा सबै तेस्रो लिङ्गी हुँदैनन् । त्यस्ता बच्चाको पनि उपचार गरेर छोरा–छोरी छुट्याउन सकिन्छ । अर्को बालबालिकामा बढी देखिने समस्या आन्द्रामा नसाको कमी हो ।
दुई साताअघि धरानको बीपी केयर हस्पिटलबाट तीन महिनाको शिशु हाम्रो अस्पतालमा रिफर भएर आएका थिए । शिशुमा जन्मिने बित्तिकै पेट फुल्दै गएर दिसा गर्न नसक्ने समस्या आएको रहेछ । तुरुन्तै अप्रेसन गरेर कोखाबाट दिसा जाने अस्थायी बाटो (कोलोस्टोमी) बनाएको रहेछ । त्यो शिशुको बायोप्सी गरेर हेयौँ । त्यसपछि शिशुको करिब तीन घण्टा लगाएर अप्रेसन गरियो । नसा नभएको स्थानमा अन्य नसा जोडियो । कोखामा बनाएको अस्थायी दिसा जाने प्वाल बन्द गरियो । अप्रेसन सफल पनि भयो । अहिले बच्चा खान दिसा गर्न सक्ने भएको छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल स्थापना गरे बालबालिकाको उपचारका लागि काठमाडौं धाउनु पनि पर्दैनथ्यो । सरकारसँग पैसा नभएर होइन, इच्छाशक्ति र ऐननियमको अभाव छ । एनजीओलाई दिँदा अपेक्षित लाभ लिन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
बिरामी बच्चालाई विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौंसम्मै एम्बुलेन्समा ल्याउँदा ज्यानकै जोखिम रहन्छ भने उपचारमा पनि जटिलता आउँछ । एम्बुलेन्समा बालबालिकाका लागि न भेन्टिलेटर राम्रो छ न आईसीयू नै । ती बालबालिकाले अस्पतालसम्म आइपुग्दा निकै कष्ट झेल्नुपर्छ ।
त्यसैगरी वीरगन्जकी तीन वर्षीया बालिकामा हर्नियाको समस्या देखिएपछि तीन साताअघि अभिभावकले यहाँसम्म ल्याएका थिए । उनको उपचारका लागि वीरगन्जको सरकारी अस्पतालमा लगिएको रहेछ । तर, उपचार भएन । तुरुन्तै निजी बाल अस्पताल पनि लगिएछ, त्यहाँ पनि उपचार पाउन नसकेका अभिभावकले पुनः अर्को निजी अस्पताल लगे त्यहाँ झन् बिरामीलाई के भएको हो पत्तै पाएनन् । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि चौथो पटकमा यहाँ आएका रहेछन् । हामीले सहज उपचार ग¥यौं । ढिलो भएको भए त्यो बच्चालाई बचाउन त सकिन्थ्यो होला तर त्यसले भविष्यमा अर्कै समस्या निम्त्याउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो । हर्निया आफैं निको हुने रोग होइन । पछिल्लो समय बालबालिकामा यो समस्या बढी देखिने गरेको पाइन्छ । यसको जति चाँडो उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अप्रेसन गरिएका ९५ प्रतिशत बच्चामा समस्या बल्झिँएको पाइएको छैन, तर नियमित जाँच गराउन भने छाड्नु हुन्न ।